Mawduuca aan la arki karin / Kalluumeysiga kalluumeysiga / Khariidadda kalluumeysiga
Waxay ka kooban tahay shey polymer ah oo leh waxqabad dhammaystiran oo heer sare ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka daah furnaanta aadka u wanaagsan, xoogga sare, xasilloonida heerkulka wanaagsan, iska caabbinta dillaaca heer sare iyo qaab-dhismeedka fudud, xasilloonida cabbirka, is-ballaarinta qadka yar-yar, korantada heer sare ah iyo iska caabbinta gabowga, aan sun ahayn iyo urta.
MH nylon thread waxay leedahay qeexitaano dhameystiran oo leh tayo la isku halleyn karo iyo gaarsiin dhakhso leh waana lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. (sida tayada, midabka, miisaanka, baakadaha, iwm.) si loogu habeeyo baahiyaha kala duwan ee suuqa
Spec: dhumucdiisuna waa 0.08-3.0mm
xirxirida: sida caadiga ah oo ay ka buuxan yihiin caag caag ah, koollo, tuubbo ama qalfoof, 2g-5000g
Sababtoo ah xooggeedu ss dhalaalaya ， sarreynta ten sare u qaadistiisa, feeraha MH ayaa ah mid ay doorbidaan naqshadeeyayaasha moodada, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa isku-xirnaanta 'taxin', xijaab ， kabaha isboortiga cost dharka dhaqanka, rooga arab.
Sidoo kale waa dunta kalluumeysiga ee ugu caansan, badiyaa 0.1mm-0.6mm dhumucdiis. Kalluumeysatada ayaa dooran kara dhumucda iyo xoogga ku habboon iyadoo loo eegayo biyaha kala duwan iyo qalabka kalluumeysiga.
0.15mm 200G Dunta Nylon
0.12mm 200G Dunta Nylon
0.2mm 200G Dunta Nylon
0.1mm 200G Dunta Nylon
1.2mm 100Y Nylon string
0.25mm 100Y Nylon string
0.9mm 100Y Nylon string
0.8mm 100Y Nylon string
0.6mm 100Y Nylon string
0.5mm 100Y Nylon string
0.3mm 100Y Nylon string
1.1mm 370G Dunta Nylon